Halyaygii Man United Ee Phil Neville Oo Sheegay In Kulanka Man United & Chelsea Ay Kooxdiisii Hore Ee Red Devils Waajib Ku Tahay In Ay Guulaysato. – WWW.Gool24.net
Halyaygii Man United Ee Phil Neville Oo Sheegay In Kulanka Man United & Chelsea Ay Kooxdiisii Hore Ee Red Devils Waajib Ku Tahay In Ay Guulaysato.
Halyaygii hore ee Manchester United isla markaana hadda ah khabiirka Sky Sports ee Phil Neville ayaa sheegay in kulanka Manchester United iyo Chelsea ee horyaalka Premier Leaque ay kooxdisiii hore ee Red Devils waajib ku tahay in ay guulaystaan. Man United ayaa shan dhibcood hoos uga soo dhacday hogaanka Premier leaque oo waqti wada hayeen dariskooda Manchester City.
Guuldaradii Man United ka soo gaadhay kooxda Huddersfield Town iyo barbarihii kulankii Liverpool ayaa keenay in Red Devils ay shan dhibcood hoos uga dhacday Manchester City oo aan xili ciyaareedkan u muuqan mid si sahlan dhibco ku lumin karta.
Phil Neville ayaa sidoo kale ka hadlay haddii Jose Mourinho uu markale Andre Herrera ku xidhan doono Eden Hazard si uu u joojin karo halista xidiga ree Belgium kaas oo jecel in uu ka horyimaado Manchester United isla markaana uu dhibaato wayn ku abuuro.
Phil Neville oo kulankan ka hadlaya ayaa Sky Sports u sheegay: “United waxaa waajib ku ah in ay ciiyaarta guulaysato, anigu ma filayo in barbaro uu yahay wax wanaag ugu filan, laakiin waxaan filayaa in muhiimadu ay tahay in ay diyaar u noqdaan in ay guulaysankaraan ciyaar sidan u wayn”.
Intaa kadib Phil Neville ayaa xusuustay halista ugu wayn ee kooxdiisii hore ee Man United kaga iman karta Eden Hazard wuxuuna yidhi: ” Chelsea waxay haysataa ciyaatoy ku dhaawacaysa iyada oo Eden Hazard uu dib ugu soo laabtay qaab ciyaareedkiisii. Miyuu Jose nin ku calaamadin doonaa isaga oo uu raacin doonaa Ander Herrera? Anigu waxaan filayaa in tatiko ahaan ay ciyaar kale tahay halkaas oo uu la iman doono qorshe uu ciyaarta ugu guulaysto”.
Xifiltanka Jose Mourinho iyo Antonio Conte ayaa xiiso wayn u yeelaya kulanka labada kooxood dhex mari doona iyada oo waliba ay koox kastaaba doonayso in ayna dhibco badan hoos uga sii dhicin hogaanka ay Manchester City hadba sii dheeraysanayso.